Anchor Mkpọchi, Stud kpọchie, U-kpọchie - Tailian Fastener
Nnọọ Ka Tailian
Dị ka a na-eduga zuru ụwa ọnụ n'èzí jakị decking ọnụahịa, anyị na-enye ngwaahịa kacha mma.
Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. emi odude ke Yongnian District, Handan City, China kasị ukwuu ọkọlọtọ akụkụ mmepụta nkesa center.
Ngwaahịa gafere ọnụego karịa 90%
ihe karịrị ndị njikwa 300
kwa afọ imewe mmepụta ikike nke 50000 tọn
Anyị factory specializes na-amị: arịlịka bolt, stud kpọchie, U-bolt, U-hoop, ígwè nkwado, ígwè bolt, cylindrical ịgbado ọkụ ntu, na-ekpo ọkụ-itinye kpaliri bolt, ígwè ụlọ elu bolt, ụlọ ịghasa, site-mgbidi kpọchie, agbakwunyere ígwè efere, Ngwuputa bolt, nut usoro, pụrụ iche ekara akụkụ, wdg
Nnukwu ogwe osisi heksagon nke nchara ígwè
Igwe anaghị agba nchara hex akụ
anyị adopts elu-edu ngwaọrụ site na nnukwu ígwè mills na nnukwu mba ígwè mmepụta ụlọ ọrụ na mpaghara, na ana achi achi àgwà nke ihe mgbe nditịm ịchịkwa àgwà. Companylọ ọrụ ahụ agafeela asambodo njikwa njikwa usoro ISO9001.
Hebei Tailian fastener Manufacturing Co., Ltd.emi odude ke Yongnian District, Handan City, China kasị ukwuu ọkọlọtọ akụkụ mmepụta nkesa center. Companylọ ọrụ ahụ nwere usoro nhazi na nrụpụta teknụzụ zuru oke maka arịlịka arịlịka, ụzọ nyocha zuru ezu na teknụzụ mmepụta teknụzụ dị elu, ma mejuputa ọrụ ihu igwe niile. Tọrọ ntọala na 2000, ụlọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke ihe karịrị 200 mu ma nwee isi obodo edebanyere aha nke yuan 120.